Ra'iisul Wasaare Rooble oo booqday isbitaalada ay ku jiraan dadkii ku dhaawacmay qarax - Jowhar somali news leader
Home NEWS Ra’iisul Wasaare Rooble oo booqday isbitaalada ay ku jiraan dadkii ku dhaawacmay...
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa booqday dhaawacyada dadkii ku waxyeelloobay qaraxii shalay ka dahcay magaalada Muqdisho.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa mid mid u dul istaagay dhallinyaradan iyadoo ay uga warbixinayeen xaaladdooda dhakhaatiirta dabiibaysa, isagoo xaqiijiyey in dowladdu ay ku bixin doonto dadaal kasta sidii ay u heli lahaayeen daryeel caafimaad oo dhammaystiran.
Wasiirka Gaashaandhigga Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Xuseen Xaaji oo ku weheliyey kormerkan Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda ayaa tilmaamay in dhallinyarada Soomaaliyeed ee ay dhaawacyadu soo gaareen ay u muujiyeen Ra’iisul Wasaaraha sida ay uga go’an tahay in ay dalkooda iyo dadkooda ka difaacaan argagixisada, aysanna ka hor istaagi karin falalkan fuleynimada ah ee cadowgu ay soo maleegayaan kamiro hiigsigooda ciidan iyo xoreynta dalka.
Sidoo kale, Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa sheegay in shacabka Soomaaliyeed oo isku duuban ay ka guuleysan doonaan cadawgan bartilmaameedka ka dhigtay gumaadka iyo ciribtirka shacabka Soomaaliyeed, maantana la joogo xilligii loo midoobi lahaa si looga sifeeyo guud ahaan gayiga Soomaaliyeed.
Previous articleHarvey Weinstein extradited to Los Angeles on sexual assault charge
Next articleDiyaaradaha Israel oo duqeeyay magaalada Qaza
Ra’iisul Wasaare Rooble oo la kulmay Ra’iisul Wasaaraha UK Boris Johnson
Shirkadda Somtel oo toddobaadkii 2aad abaalmarisay macaamiil faro badan